Ihe na-esi n'ịhụnanya ahụ pụta maka onye ahụ na onye ahịa
Ụfọdụ ndị kwenyere na nsogbu ndị dị na ndụ ha nwere ike idozi ya site n'enyemaka nke ememe nkwurịta okwu. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịmara tupu oge eruo banyere nsogbu nke ọnụọgụ ahụ maka onye ahụ na onye ahịa. Na ọzọ iche echiche tupu ịchọrọ ndị na-agba afa na ndị amoosu.
Ihe nchoputa nke ederede maka onye ahia
Na-eme dịka onye ahịa, mmadụ adịghị aghọta ihe ọhụụ nke ịhụnanya hụrụ maka onye na-adọrọ mmasị. Ma onye ahịa na onye ahụ na-akwado ya na-ekere òkè na ya, ha bụ isi ihe abụọ nke ememe ahụ.
Mmetụta na-adịghị mma nke spell nwere ike ichetara gị banyere onwe gị n'oge na-adịghị anya, mana enwere ike inwe mmetụta na-egbu oge. Ha nwere ike ịmalite inwe ahụmahụ site na ụmụ, na ọbụna ụmụ ụmụ ndị ahịa dị n'ụdị nke ezinụlọ ọnụ . Otú ọ dị, onye kpebiri ịhọrọ onye hụrụ ya n'anya ma ọ bụ onye hụrụ onwe ya n'anya nwere ike ịrịa ọrịa nke ọma mgbe ememe ahụ gasịrị, ọdịda ya na ọrụ ya ga-achụ ya. Ọ bụrụ na ọnụọgụ ahụ dị ike, mgbe ahụ na onye ahịa nwere ike ịnwe ihe ọghọm nke ga-ebibi ndụ ya kpamkpam.
Kedu ihe dị ize ndụ bụ ịhụnanya na-agbasa maka onye ahụ na-akpata ya na ihe ọ ga-esi na ya pụta?
Site na irube isi na ọchịchọ na onye ọzọ site n'enyemaka nke ememe ahụ, onye kwesịrị iburu n'uche na ọ gaghị ekwe omume igbochi onye ahụ kpamkpam. N'okpuru eleghi anya, otu onye ka ga-eguzogide. Oge a ga - eduga mbibi nke psyche na onye a na - agba afa nwere ike ịga na - arahụ.
O kwekwara omume na n'ihi ịhụnanya ahụ, ụdị onye ahụ ga-agbanwe, onye ahụ ga-abụ onye dị iche iche, onye ọbịbịa nke nwere àgwà ọjọọ na àgwà ma ọ bụ "ihe oriri" na-enweghị isi.
Ịhụnanya onwe onye na-agbasa kwa ọnwa na nsogbu ya
Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-ejide n'aka, na ihe ọjọọ na-esi n'ịhụnanya ahụ pụta maka onye ahụ a na-ata ahụhụ na onye ahịa agaghị ama banyere onwe ha, ma ọ bụrụ na ọ na-emetụta otu ememe a na-eme naanị. Dịka ọmụmaatụ, ịhụnanya na-atụgharị maka otu ọnwa. Mana ebe a ka onye ahịa na onye na-egwu egwu na-apụta na otu onye, ​​ya mere iwu nchịkọtaghachi ga-arụ ọrụ n'enweghị ihe ọ bụla. N'ikpeazụ, ihe ahụ dị njọ: nwa agbọghọ ahụ na-ewe ọbara ọbara ọbara ọhụụ ma tinye ya na mmanya (ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ọzọ), wee nye onye na-ahụ n'anya ihe ọṅụṅụ. Ma ọbara bụ ngwá ọrụ dị ike dị ike, ya mere, iweghachi azụ site na spell nwere ike ịdị ike. Ihe ize ndụ ndị ahụ nwere ike ịghọ ezigbo zombie, nwoke nke nọpụrụ n'ụwa ma nwee ụdị mmetụta ọ bụla . Nwanyị ahụ ji ụda okwu, ihe ize ndụ na-aghọ nwa, na-efunahụ ya na ọbụna na-echefu uche ya.
Olee otu esi akwadebe maka udo?
Dị ka nke Shrove Tuesday
Na-agba ọsọ maka oge niile
Ọnụ ọgụgụ ole na-emesapụ aka?
Ụlọ nke doll-motanki nwere aka
Na-asụ "Dibibi Dibebe"
Simoron maka ịhụnanya
Nrụrụ aka na ahụ ike - ihe ịrịba ama na otu esi ewepụ ya?
Ngwá mmiri ọgwụ maka ụmụ agbọghọ
Ntutu isi maka ndị na-eto eto
Dakota Johnson na mkparịta ụka Glamor gbara ajụjụ ọnụ: "Adị m njikere ịkwaga"
Tea maka ụmụ nwanyị dị ime
Kaadị cardigan maka nwanyị
Kedu esi edozie akwa n'elu saịtị?
Potato planter maka motoblock
Ejiji ejiji uwe oyi-oyi 2015-2016
Akụrụ akwụkwọ maka ụmụ agbọghọ
Gary Oldman lụrụ nwunye nke ise
Nri anụ ahụ maka ahụ mmadụ
Kedu otu esi ahọrọ akwa ogwu?
Nri maka ụkwụ
Sofa n'ime ụlọ ụmụaka maka nwa agbọghọ
Ihe ejiji aka aka gị
Agbamakwụkwọ na-agbanye ụgbọ ala